Ukuxuba ama-Screwger we-H2S we-Phase-Transfer-Reaction - Hielscher Ultrasound Technology
Hydrogen sulfide (H2S) igesi elingenambala elivela ngamafutha angcolile negesi yemvelo. H2S inobuthi, ibuhlungu, ishisa futhi iqhuma. Kungasuswa emafutheni nasegesi ngama-scavengers, i-hydrodesulfurization, i-activated carbon filtration noma ukusabela nge-iron oxide. Amakhamera we-Hielscher ultrasonic asiza ukuphazamiseka kwesigaba-H2S scavengers.
Ama-Scavengers we-Hydrogen Sulfide (H2S) Ukususwa kwe-Oil Crude
Indlela evame ukusetshenziswa yokususwa kwe-Hydrogen sulfide yilabo abaqothula ama-scavengers, njengamakhemikhali e-Triazine. I-hexahydro-1,3,5-tris (i-hydroxyethyl) -s-triazine (eyaziwa nangokuthi i-MEA triazine noma i-HHTT) isithasiselo esisekelwe ku-triazine. Le nhlanganisela yesikhukhula esinqunyiwe kwamanzi iphendula ne-H2S kusukela esigabeni samafutha esizungezile esingaphansi kwesigaba sendawo yesimingcele salo monoethanolamine (MEA) ne-dithiazine. Lokhu kuyisenzo sokudlulisa isigaba futhi kudinga ukuxuba / ukuxuba okuxubile ngesigaba samafutha. Ngaphandle kokuhlanganiswa okufaneleko kokuhlanganiswa kwe-triazine okusekelwe njalo kusetshenziselwa ngaphezu kwamazinga adingekayo. Lokhu okweqile kanye nemikhiqizo ye-reaction scavenging ne-hydrogen sulfide, kubangele ukubola nokuhlungulwa kwemishini ephansi.
Ukuthintana Okungaphezulu Kwama-Small Doplets
Abaxube be-Hielscher ultrasonic bathuthukisa ukuphazamiseka kwesigaba-ukudlulisa ama-kinetics kuhlelo lwamakhemikhali-lwamanzi. I-cavitation ye-Ultrasonic ikhiqiza ukugcoba okukhulu kwe-hydraulic futhi iphula isakhi se-scavenger ibe yi-sub-micron ne-nanosize amaconsi. Lokhu kunciphisa ukuphakama kwe-droplet kwandisa indawo yokuxhumana phakathi kwesigaba sokukhwabanisa nesigaba samafutha futhi sithuthukisa i-reaction kinetics. Ukusebenzisa i-ultrasonics, amaphesenti omthamo we-scavenger compound angancipha, ngoba ama-emulsions amahle adinga ivolumu elingaphansi ukuhlinzekela okufanayo okuhambisana nesigaba samafutha.
Ukuthintana okwengeziwe ngokuVala ukuPhepha
Ukuphula i-scavenger compound ibe ngamaconsi amancane kuveza amaconsi amaningi ngegaloni, futhi. Inombolo ephakeme yamaconsi aholela ebangeni elincane phakathi kwamaconsi amancane. Ngakho-ke, amafutha amaningi asondelene ne-droplet ye-scavenger.
Ukugxila kokunciphisa okuphansi
Ama-scavengers ajwayele ukuvezwa yi-ppm ka-H2S emafutheni. Lokhu kungabangela ukungeza okungenani i-1 litre ye-scavenger composound ngama-1000 amalitha wamafutha (1: 1000). Uma kwenzeka isilinganiso esincane se-volumetric, kuyindleko eningi ephumelelayo ukukhiqiza umthamo omkhulu wezinga eliphezulu le-volumetric (isib. 1:10) kuqala. Lokhu kudala amaconsi amancane omswakama amisiwe esigabeni samafutha esingahlanjululwa esiteji sesibili kuze kufike isilinganiso sokugcina sokuziphendulela okudingekayo.
I-Ultrasonic Reactor Capacity
5 ukuze 200ml 50 ukuze 500ml / iminithi UP200Ht, UP400S
0.1 ukuze 2l 0.25 ukuze 2m3/ ihora I-UIP1000hd, I-UIP2000hd
0.4 ukuze 10L 1 kuya 8M3/ ihora UIP4000
na 4 kuya 30m3/ ihora UIP16000
na 30m ngenhla3/ ihora yinhlanganisela I-UIP10000 noma UIP16000
Uhlelo lwe-Ultrasonic Mixing – Imicu emi-2 ye-6x10kW (enesilinganiso esingu-2x120m3/ hr)
Izifanisi ze-Hexahydro-1,3,5-tris (hydroxyethyl) -s-triazine
I-Ultrasonicator I-UIP4000hdT i-emulsification esemgqeni yama-ejenti ehlaselayo